WBO Dinagdeen Deggeruun Fardii Dha! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWBO Dinagdeen Deggeruun Fardii Dha!
Via Tulluu Hiyyeessaa, Caamsaa 25, 2019
WBO amma guddatee bobbaa isaa bal’ifatee socho’aa jira. Humni WBO magaalaa fi baadiyaa irraa QEERROO fi QARREEN heddumminaan itti dabalamuu fi Oromooti RIB fi humna Poolisii Oromiyaa adda addaa irraa itti yaa’uun dabalamuu irraa hedduu guddatee jira. Kuni qabsoo dantaa Oromoo kabajchiisuuf Wabii guddaa dha. WBO kan lubbuu isaa ummata Oromoof wareegee kana Oromoon gargaaruun qooda qabsoo ulfaataa fi kabajaa qabuu dha.
WBO duraan gaafa Hooggana ABO waliin wal quunnamtiin zaataa ture BAAJATA waraanaa ABO irraa argataa ture. Baajati kunis BUUSII MISEENSUMMAA keessattu irra guddaan miseensoti ABO Diasporaa jiran buusan irraa ti. Maqaa ABOn waan buufamuuf maallaqichi karaa Hooggana ABO amma Finfinnee jiruu taligamee baajatni WBOfis irraa kennamaa ture.
Akka Hoogganni ABO biyya seenee Finfinnee gaheen hojiin diinaa (Goobanoota OPDO) guddaan (1) Hooggana ABO gidduutti wal shakkii uumuu; namtokkee hoogganootaa keessa ofitti qabuu fi bituu; sochii hoogganaa daangaa itti gochuu dha; (2) Quunnamtii Ajajaa Hooggana ABO fi WBO gidduu adda kutuu; fi (3) lola WBO irratti bantee akka WBOn dhabamu gootee Hoogganichatti deebitee dhabamsiisuu fi akka HARIIROON AJAJAA Hooggana ABO Finfinnee jiruu fi WBO dirree lola dhaabbataa Mootummaan itti bane gidduu adda citu gochuu ture. Walquunnamtiin Hoogganaa fi WBO lola irra fufinsaan jiru gidduu gara baatii 6 caalaaf cite. Hoogganni ABO Finfinnee jirus gaafa quunnamtiin guutuutti citee jedhu fakkeessaa fi kabeebsaa irra oggaa dhiibbaan Basaasota OPDO (Jawar, Baqqalaa fi Bayyanaa Sanbatoo fi garee isaanii itti baay’atu) osoo hin jaallatin “Ammaan booda Hiree fi Dhimma WBO Ummata Oromoo fi Abbootii Gadaa Oromiyaatti Kennineerra” kan jedhu labse, Suni akeeka OPDO 2ffaa bakkaan gaheefi.
Hoogganni ABO erga Finfinnee seenee booda haala lolaa diinni xiiqeffatee WBO lolu keessatti hanga har’aatti BAAJATA silaa WBOn irraa haqa qabu dubbiin SIYAASAAtti fudhatamee Mootummaa OPDOn gara YAKKAAtti Hoogganicha himachiisee kan rukuchiisuu danda’u waan ta’eef Hoogganni baajata WBOn hin geenye.
Murtii siyaasaa “WBO ummata Oromoo fi Abbootii Gadaatti” kennine erga Jaal Daawud jedheen boodas BAAJATNI WBOf takkaa kennameefii hin beeku. Ittiin yakkuuf diinnis sana waan hordoftuuf danqaan biraa jira. Itti dabalas, Hoogganni ABO Finfinnee seene keessa garaa garummaan yaadaa karaa nagaa qofa qabsoofnaa fi WBO ganuu hin qabnuun uumamee rakkoon keessaa namatti himuun hin danda’amne yeroo ji’a 6n duraaniitti mudannoo ture. Amma illee sun wal hin calalle. Hoogganni ABO irra guddaan yoo WBO hin gannuutti amane illee osoo warri yaada faallaa sanii qaban jiranii (waan sana diinatti saaxiluu danda’aniif) HICCITIIN illee WBOf Baajata qicuu hin dandeenye. Wal sakaalee jira!! DANQAAN MIIDHAGA KEESSAA; GUFUUN ABO KAN ABOn GADI BAHEE NAMATTI HIMACHUU HIN DANDEENYE KANA! DHOKSAAN FANXOO HIN FAYYISU!
Itti dabala danqaa yookaan sababa biraa argametu jira. WBO yeroo ji’a 6 oliif Hooggana isaa kan Finfinnee jiru irraa ajaja guyyuu ittiin sosso’u waan hin argatiniifi akka kanatti itti fufuun qabsicha waan gaaga’uuf sochiin OPDOs ilmaan Nafxanyootaa waliin ABO dhabamsiisuu wan hubateef akka Kaayyoon Ganamaa ABO itti fuftu gochuuf High Command WBO tolfatee sochii waraanaa itti jiru taliguutti ka’e. Kuni diina dugda kute. Ergasii sochiin WBO diina irratti injifannoo ol aanaa galmeessaa jira. WBO sakaalamee of ittisa qofa irra ture diina isa dhabamsiisuuf itti bobba’u haleeluu jalqaba! Kuni ammas Hooggana Finfinnee jiru yaaddoo guddaa keessa buuse. Hoogganni ABO ammas rarra’a keessa seene. Haala fufinsa duula WBO irratti diinnnii deemsisaa jiru irra WBO directly quunnamanii ajajuun sochoosuun waan hin danda’amneef boodana kana gara karaa NAGAAn qabsoo gochuu fi Kaadiroota ijaarratee sochii siyaasaa gochuu fi filannoof dorgomuuf waan murteeffachuutti luucca’e fakkaata. Kanaaf BUUSII MISEENSUMMAA Diasporaa keessatti Oromooti buusan keessaa BAAJATA WBOf kennuun seeraanis isaan sodaachisee jira. Kanaaf Miseensotni ABOf buustan akka maallaqi keessan WBO gahaa hin jirre carraa kanaan isin hubachiifna.
HAALA MADDA DINAGGEE WBO AMMAA:
Hamma yoonaatti WBOn madda dinagdee qabsoo isaa kan ta’eefii jiru irra guddaatti Ummata Booranaa, Gujii, Wallaggaa fi Shawwaa ti. Godinaaleen akka Ilubbaaboor, harargee fi Jimmaa waan sochiin WBO isaan keessatti jiraatu illee sadarkaa guddaa irra yoo hin geenye ta’e illee WBO isaan keessa sosso’u gargaaruu irraa of qusatanii hin jirani. Galata guddaas qabu. Qotee bulaan keenyaa fi Oromooti kaan ijoollee isaanii agabsanii ofii hagabanii WBO nyaachisu, obaasu; uffisu. WBOtti ijoollee isaanii arihanii itti dabalanii qabsicha gabbisaa ofiis waliin lolaa jiru.
Egaa WBOn Ummata Oromoo abdata. Waan ummata isaa irraa argatuu fi diina irraa humnaan cabsee booji’uun qabsoo finiinsaa jira. Kaayyoon isaas of irratti irkannoo waan taateef qabeenyuma diinaan diina loluun madda biroo dha.
Walleewwan Qabsoo Haaraa fi Gooticha Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Hamilchiisan! - 2020 1. Sabboonaa Tafarraa:…
Sirna Kabaja Ayyaana Guyyaa WBO fi Seensa Bara Haaraa Kan 2018 WBO Zoonii Kibbaatiin Sirni…
Yaadota akasii kana,osoo karaa,dhoksaa ta’en walii dabarfame gaaridha.Odefannoon,xiqo hinqabdu.wantooti tarrefaman,ija tarsiimo waraanaatiin yommu ilaalamu,dhibaan inniqabu heddu guddodha.kanaaf, dinaaf,wanta karaa saaqu hinkeeniina.
“Waraabeesi waan halkan namagodhu waan bekuuf guyyaa nama baqata” jedhu manguddoon Oroomo .OPDOn,badii kaleesa hojeette waan bektuuf,ABO,dhabamsiisuf yaalti.
Qabsoon Oroomo,jaarraa tokko ol ittuma cimaa dhufe male hinlaafanne.Abaabayyun ko akkas jedhera.”yaa mililiik,ciidhaanko murta male fincaanko hinmurtu.”jedhe jette akkoyyeekotu natihime.kanaaf ifishe baddii male qabsoonkun hanga galmasaa gahutti hin hafu.kanaafu “harka harkaan jette yeyyiin” akkuma jedhame waan of harkaa qabnu nidarbana.Dololoon waltti yateetu laga taati.
Yaadakeetiif debani,hori buli,aga dhagahi Biliisuumma argi!